DIPLOMATIC RELATIONS ESTABLISHED BETWEEN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR AND THE HOLY SEE – Ministry of Foreign Affairs
DIPLOMATIC RELATIONS ESTABLISHED BETWEEN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR AND THE HOLY SEE
BETWEEN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR AND
The Republic of the Union of Myanmar and the Holy See, desirous of promoting bonds of mutual friendship, have established diplomatic relations at the level of Embassy on the part of the Republic of the Union of Myanmar and of Apostolic Nunciature on the part of the Holy See.
The Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of the Union of Myanmar and the Holy See was issued in Vatican City on4May 2017.
Myanmar is making efforts to expand its diplomatic ties with countries around the world. The Holy See is the 118th country with which Myanmar has established diplomatic relations.
Dated, 4st May 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံ (Holy See) တို့အကြား
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံ(Holy See)တို့သည် အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရန် ဆန္ဒရှိကြသည့်အားလျော်စွာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘက်မှ သံရုံးအဆင့်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံဘက်မှခရစ်ယာန်သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဆင့်ဖြင့်လည်းကောင်း သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ရန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံတို့အကြား သံတမန် အဆက်အသွယ် စတင်ထူထောင်ကြောင်း ပူးတွဲကြေညာချက်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် ဗာတီကန်နန်းတော်၌ ပူးတွဲထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် သံတမန်ဆက်ဆံမှု တိုးချဲ့ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ၊ ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ (၁၁၈)နိုင်ငံမြောက် သံတမန် အဆက်အသွယ် ထူထောင်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်